ट्रम्पको इज्रायललाई जेरुसलेम उपहार , जोखिम कि शान्ति ? | Hamro Patro
ट्रम्पको इज्रायललाई जेरुसलेम उपहार , जोखिम कि शान्ति ?
जेरुसलेममा रहेका द गार्जियन पत्रिकाका रिपोर्टर लेख्छन कि ट्रम्पको यो भाषणको अरबी अनुवाद सुनेपछि जेरुसलेमको मध्य भाग शुहाफातको एउटा सामाजिक क्लबमा बसेका यूवा शरणार्थिले अबु अतया भनेर चिच्याए । उनका अनुसार यस भाषणले ठूलो समस्या ल्याउनेछ र उनी लगायत धेरै जेरुसलेमका बासिन्दाहरु अमेरिकी निर्णय प्रति रुष्ठ छन् ।
अमेरिकाका रोष्ट्रपती ट्रम्पले जेरुसलेमलाई इज्रायलको राजधानी निर्धारण गरेपछि बिश्वभरि एकप्रकारको लहर चलेको छ । बिशेषत ट्रम्पले बिश्वभरिवाटै नरुचाएको प्रतिक्रिया अनि यसको बिरोध पाइरहेका छन् । शदियौं देखि चलिरहेको इज्रायल प्यालेस्टाइनको बिवादमा यस निर्णयले पानी थप्छ या घ्यू त्यो हेर्न बाँकी छ । अर्कोतर्फ अरब देशहरुको टुटदै गएको समबन्ध र समन्वयमा अमेरिकाको यो कदम र घोषणाले के असर गर्दछ, त्यो त झनै हेर्न बाँकी छ । ह्वाईट हाउसमा दिएका छोटो भाषणमा ट्रम्पले इज्रायलको तेल अबिबबाट अमेरिकी दुतावास जेरुसलेममा सार्न समेत आदेश दिएका छन् । यति मात्र नभई यसकालागि आवश्यक आर्किटेक्ट अनि जनशक्तिको चाँजो पनि द्रुत गतीमा मिलाउन उनको आदेश थियो । यो अपरझट आदेश पालना गर्न अमेरिकी अधिकारीहरुलाई कम्तीमा पनि ३ बर्ष लाग्ने अनुमान छ । उनले गरेको भाषणमा अब आफूले अन्नत जेरुसलेमलाई इज्रायलको राजधानीका रुपमा निर्धारण गरेको र यसअघिका राष्ट्रपतीले यस मुद्धालाई चुनावको मुख्य मुद्धा बनाएपनि हस्तान्तरण गर्न नसकेको कुरा आफूले हस्तान्तरण गरेको बताए । उनका अनुसार उनको यस कदमले इज्रायल र प्यालेसटाइनबीचको द्धन्दलाई नयाँ आयाम र पहुँच दिएर शान्ति स्थापनार्थ भूमिका खेल्नेछ भन्ने बिश्वास पनि प्रकट गरे ।
उनको यस कदमले अरब अनि अन्य मुसलमान देशहरु अमेरिकी गठबन्धनवाट बाहिरिन सक्ने संभावना पनि बढेको कुटनितिज्ञहरुको अड्कल छ । अमेरिका भित्र पनि यस कदमको चर्को बिरोध भइरहेको छ । राष्ट्रपतीको यो भाषण लगत्तै मुसलमान देशमा भएको अमेरिकी दुतावासहरु जस्तै टर्की, जोर्डन, जर्मनमा सुरक्षा संवेदनशीलता अझ कडारुपमा अपनाइएको थियो । डिसेम्बर ८ तारिखमा संयूक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषधको १५ सदस्यीय टोलीको यसै बिषयमा छलफल गर्न भेला हुँदैछन् । यस टोलीमा बेलायत, इटाली र फ्रान्सका अधिकारीहरुको उपस्थिती पनि रहनेछ । ट्रम्पले आफ्नो भाषणमा कति जेरुसलेमको भाग इज्रायलको हुने र कति नहुने भन्ने बिषयमा आफू नबोल्ने र यस कार्य दुबै पक्ष अर्थात इज्रायल र प्यालेस्टाइनको आपसी सम्झौतामा तय हुन दिने पनि बताए ।
उता अर्को शक्तिकेन्द्र बेलायतकी प्रधानमन्त्री थरेसियाले भने मध्यपूर्वी क्षेत्रको शान्तिकालागि ट्रम्पको यो निर्णय सहयोगी नहुने बताउदै यस निर्णय आफूलाई लगायत बेलायती जनतालाई मान्य नहुने बताइन् । फ्रान्स अनि जर्मनका राष्ट्रप्रमुखले पनि यो कदमको सर्मथन गरेका छ्रैनन् । यूरोपको यो उदासिनता अनि समग्र अरब राष्ट्रहरुको भावना बिपरित इज्रायलको अन्धो समर्थनमा अमेरिकी राष्ट्रपतीको यो कदमले कहँ पूर्याउने हो, हेर्न बाँकी छ । उता इज्रायलको सरकारले अमेरिकाको यस कदमको स्वागत गर्दै शान्तिको द्धार खुलेको बताएका छन् । इज्रेली प्रधानमन्त्री नेतेनीयाहुले सहृदय अमेरिकाको यस कदमलाई महत्वपूर्ण कदम करार दिदै स्वागत गरेका छन् ।
प्यालेसटाइनका राष्ट्रपती महमुद अव्बासले भने अमेरिकाले आफ्नो मध्यस्तकर्ताको भूमिकाको गलत फाइदा उठाएको बताएका छन् । उता साउदी अरब, टर्की, जोर्डन, इजिप्ट अनि लेवननले पनि अमेरिकाको खुलेरै बिरोध गरेका छन् । जेरुसलेममा रहेका द गार्जियन पत्रिकाका रिपोर्टर लेख्छन कि ट्रम्पको यो भाषणको अरबी अनुवाद सुनेपछि जेरुसलेमको मध्य भाग शुहाफातको एउटा सामाजिक क्लबमा बसेका यूवा शरणार्थिले अबु अतया भनेर चिच्याए । उनका अनुसार यस भाषणले ठूलो समस्या ल्याउनेछ र उनी लगायत धेरै जेरुसलेमका बासिन्दाहरु अमेरिकी निर्णय प्रति रुष्ठ छन् । उता ट्रम्पभने आफ्नो भाषणमा जेरुसलेमलाई इज्रायली सरकारको केन्द्रबिन्दु र इज्रायली सर्वोच्च अदालतको आधार रहेको बताइरहेका थिए । उनले जेरुसलेम इज्रायली प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतीको कार्यालय भूमि रहेको बताँउदै सम्पूर्ण इज्रायलको शासन मन्त्रालयहरु जेरुसलेममै रहेको बताए । धेरै जना बिचारकहरुका अनुसार ट्रम्पको यो कदम उनको इज्रायलप्रतिको उपहार र इज्रायली प्रधानमन्त्री संगको मित्रताको मुस्कान रहेको बताएका छन् । अमेरिकाको यो उपहार बिश्व अनि मध्यपूर्वका लागि कत्तिको महंगो पर्ने हो <
इतिहासले बताउनेछ ।
द गार्जियन पत्रिकाको बिशेष पृष्ठ अनुवाद